गगन थापा अब उपप्रधानमन्त्री ! Darpansansar News
गगन थापा अब उपप्रधानमन्त्री !
काठमाडौं । दुईसाता अघिसम्म स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रुपमा चर्चा थियो । यतिबेला कांग्रेसभित्र थापाका बारेमा अर्को चर्चा सुरु भएको छ ।
स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने र उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा गगन थापालाई अघि सार्ने भन्ने चर्चाले स्थान पाइरहेको छ ।
यसका लागि कांग्रेसभित्र लबिङ सुरु भएको छ । देउवा अबको एक देखि डेढ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि कांग्रेसभित्र स्थानीय चुनावको तयारीसँगै नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य पनि सुरु भएको हो ।
कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार युवा नेता एवं हालका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्दैछन् ।
उनलाई यति ठूलो पद दिन एकथरी कांग्रेसजन सकारात्मक छन् । काम गरेर देखाउने थापा उपप्रम भन्दा सरकारको साख जोगिने देखिएपछि स्वयं सभापति देउवा पनि सकारात्मक रहेको चर्चा छ ।
किनकी नेता कृष्ण सिटौला र गगन थापालाई देउवाले विश्वास पात्रका रुपमा लिन थालेको बताइन्छ । पार्टी संचालनका लागि सिटौला र गगनको टीम देउवाका लागि अपरिहार्य भइसकेको पनि चर्चा छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका थापाले उदाहरणीय काम गरेपछि कांग्रेसमा उनलाई नयाँ सरकारको उपप्रधानमन्त्री बनाउन लबिङ सुरु भएको बताइन्छ । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत र व्यवहारिक काम गरिरहेका छन् ।
थापाको प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तन आएपछि कांग्रेसभित्र उनलाई नयाँ सरकारमा उपप्रम बनाउन केही केन्द्रीय सदस्य र नेताहरु सकारात्मक देखिएका हुन् । गगनका सहयोगीहरुले पनि उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा देख्न चाहेको र लबिङ गरिरहेको उनका एक निकट सहयोगीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम देखाउने ...
काठमाडौँ । सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई उद्यमसिलता विकासका लागि साहुलिएत दरको ...
हेटौंडा । तीन नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकटेलले पत्रकारलाई ...
काठमाडौं । नेकपा निकट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको घरमा मार्सि चामलको भात खाएका नेकपा ...
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद कोमल ओलीले ‘तपस्वी’ भनिने रामबहादुर बम्जनले ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् ...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस इलामले लगानी सम्मलेनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गर्न ...
काठमाडौं । हत्या मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित ...
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ...